मेरी छोरीको ज्यान लिनेलाई जे’लमा सडाए मात्रै मेरि छोरीले न्याय पाउँछ भन्दै छाती पिटिपिटी रोइरहन्छन् सम्झनाका बुवा – Sanchar Patrika
मेरी छोरीको ज्यान लिनेलाई जे’लमा सडाए मात्रै मेरि छोरीले न्याय पाउँछ भन्दै छाती पिटिपिटी रोइरहन्छन् सम्झनाका बुवा
October 3, 2020 96
बझाङ। बझाङमा क’रणी पछि ह त्या गरिएकी १२ वर्षिया सम्झना कामीका बुवा बिकास भारतबाट आएका छन्। भारतबाट आएदेखि बिकास चैनपुरस्थित एक सानो बन्द कोठाभित्र छन्। जतिखेर पनि आँखाभरि आँशु आइरहन्छन्। रुँदै भन्दै थिए ‘छोरी जन्माउने सबै बुबा पापी हुन् । म पनि पापी बुबा हुँ। तीन हप्ता अगाडी मेरी छोरीले त्यताबाट स्यान्डल ल्याइदिनु है बाबा भनेकी थिइ।
स्थानीय शेर कामी दाइको हातमा स्यान्डल पठाएको थिएँ। मैले पठाएका स्यान्डल पनि नलगाइ छोडेर गइ मेरी छोरी। फूलजस्ती छोरी त्यो पापीले चटक्कै चुँडेर लग्यो। उसका कति सपना थिए सबै अ’धुरै रहे। छोरीलाई नदेखेको ४ वर्ष पुग्यो।’ छोरीको करणी र ‘ह’त्या रालाई कि त ‘फाँ’सी कि त आ जिवन जेलमा सडाए मात्रै मेरि छोरीले न्याय पाउँछ भन्दै छाती पि’टिपि’टी रोइरहन्छन् विकास। स म्झना १२ व र्षीया जेठी छोरी हुन्। त्यसपछि ४ बहिनी र एक भाइ छन् सम्झ नाका।
Prevकोरोनामाथी श्रीलङ्कामा मुसे ज्वरो, ७० भन्दा बढीको मृ-त्यु, छ हजारभन्दा बढी सङ्क्रमित
Nextहामी चाडै फिल्म बनाउनुपर्छ भन्ने कुराको विपक्षमा छौः दीपकराज
बधाई छ ! सज्जा चौलागाईं बनिन् ‘नेपाल आइडल’ को विजेता
मुटु पोल्ने समस्याले हैरान हुनुहुन्छ ? सेवन गर्नुहोस् अदुवा पानी, मिल्नेछ केही मिनेटमै राहत